KMF/Cnoe: “Mila fari-pahaizana ny firotsahana ho depiote” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Mila fari-pahaizana ny firotsahana ho depiote”
Kandidà tsy miankina no betsaka no ho ny avy amin’ny antoko na vondrona politika. Amin’izany, raha ny fijerin’ny KMF/Cnoe: “Mila fari-pahaizana ny firotsahana ho depiote”.
“Be dia be ny manakiana ny amin’ny firotsahan-kofidin’ireo mpanakanto na mpihira. Tsy manana olana amin’ny mpihira ny KMF/Cnoe fa manana olana amin’ny mpihira tsy manana fahaiza-manao ara-tsaina amin’ny fanaovan-dalàna.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, ny amin’ny firotsahan-kofidina amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao, izay avy amin’ny tsy miankina no betsaka ary misy amin’izy ireo, ohatra, ny mpihira.
Tsy voatery ho mpahay lalàna ny solombavambahoaka. Manana mpanampy parlemantera izy, tokony hahafehy ny lafiny lalàna eo amin’ny sehatra sosialy, ny sehfatra toekarena… Tokony hanana fari-pahaizana ilaina kosa ny solombavambahoaka mba ho mendrika ny hoe solombavambahoakan’i Madagasikara. Tsy olana ny hoe mpihira, toy ny asa hafa rehetra: dokotera, mpampianatra… Fa mila izay fari-pahaizana izay.
Tsy misy afa-tsy fanabeazana no hanarenana izany rehetra izany. Tsy fanabeazana olom-pirenena atao any anaty vahoaka fotsiny izany fa fanabeazana any an-tsekoly hatrany amin’ny ambaratonga voalohany sy faharoa. “Hifidy ben’ny Tanàna izao isika atsy ho atsy fa mila mianatra an’izany. Tsy hoe be maripahaizana fa olona nianatra: mahalala ny tokony hataony, mahalala ny filan’ny olona”, hoy izy.
Mila fanabeazana olom-pirenena ny fampielezan-kevitra
“Eo no resahin’ny KMF/Cnoe hatramin’izay: raha jerena ny rakibolana, tsy misy miteny hoe “fidio” na “ampio” ny atao hoe fampielezan-kevitra”, hoy izy manoloana ny adihevitra ny amin’izay tokony hatao na tsia mialoha ny tena fampielezan-kevitra. Fa rehefa manely hevitra ny olona iray, na ahoana na ahoana endrika anaovany izany: efa fampielezan-kevitra hatrany izay. Ny fanajana ny lalàna no samy manana izay heveriny ho rariny aminy ny tsirairay.
Tsy misy afa-tsy ny fianteherana amin’ny hoe fahendren’ny Malagasy àry ny azo atao amin’izany rehetra izany amin’izao. Eo koa ny fanabeazana ny olom-pirenena. Nefa be ihany izay natao tamin’ny fifidianana filohan’ny Repoblika izay: ireny niaraha-nahita ireny… “Hanao ahoana isika amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao?”, hoy ihany izy.